BFM sy ny MEF: hasiana fiantohana ny fanorenan-trano | NewsMada
BFM sy ny MEF: hasiana fiantohana ny fanorenan-trano
Hiampy ny sehatra fiantohana atao eto amintsika. Anisan’izany ny fanorenan-trano, fepetra vaovao tsy maintsy hatao, hanitarana ny vola kirakirain’ny orinasam-piantohana eto Madagasikara.
Ny fiantohana ny fiara no tena be mpahafantatra! Vitsy ny lafin-javatra misy fiantohana eto Madagasikara. Nambaran’ny governoran’ny Banky foiben’i Madagasikara, Rabarijhon Henri, fa kely (0,7%) mitaha amin’ny Vokatra anatiny ankapobeny (PIB) ny vola kirakirain’ny orinasam-piantohana eto amintsika. Efa mahatratra 1,5% (avo roa heny) anefa ny any Rwanda sy Kenya. Koa, ilaina ny hanitarana ny sehatry ny fiantohana ka anisan’ny voakasik’izany ny fanorenana trano, havaozina isaky ny 10 taona.
Hamafisina koa ny any an-tsekoly ho an’ny mpianatra. Eo koa ny fanamboarana fiarakodia.
Sehatra hafa azo asiana fiantohana koa, saingy tsy voatery tsy maintsy atao toy ny fanorenan-trano ny lafiny fambolena. Ahitana voina ity sehatra ity, rehefa sendra loza voajanahary manimba ny vokatra, ohatra.
Eo ambany fiahin’ny CSBF
Tanjona amin’ireo voalaza ireo ny hampitomboana sehatra sy ny vola kirakiraina amin’ny lafiny fiantohana, mampiakatra ihany koa ny tahan’ny fifanakalozam-bola eto Madagasikara.
Araka izany, nafindra amin’ny Vaomiera miahy ny banky sy ny lafiny ara-bola (CSBF) ny fiahiana ny sehatry ny fiantohana, araka ny fenitra iraisam-pirenena. Niahy azy teo aloha ny sampandraharaha Fitantanambolam-panjakana. Natao sonia, omaly, ny fifanarahana mirakitra izany, nataon’ny minisitry ny Toekarena sy ny Tetibola, Randriamandrato Richard sy ny governoran’ny Banky foiben’i Madagasikara, Rabarijhon Henri.
Hanamafy orina ny fiantohana
Mifantoka amin’ny lafiny telo ity paikady vaovao ity. Hampiroboroboana ny fanamafisana orina sy hahamarin-toerana ny sehatry ny fiantohana. Hampanarahana araka ny toetr’andro ny fiantohana ary hametrahana lasitra hiarovana ny mpanjifa.
Nilaza koa ny governoran’ny BFM, fa maro ny ezaka natao hanatsarana ny tontolon’ny vola eto amintsika. Hihatra afaka fotoana vitsy ny lalàna vaovao mifehy ny banky sy ny fiantohana. Tafiditra ao anatin’ireo ity fanitarana ny sehatry ny fiantohana ity, izay hosahanin’ny CSBF, rafitra eo ambany fiahian’ny Banky Foibe Madagasikara.
Antsohihy : omby halatra niisa 132 saron’ny zandary 21/04/2021
Saron’ny zandary tany Nosy Be: olona 33 nikasa hiondrana antsokosoko ho any Mayotte 21/04/2021
Toamasina: lehilahy iray maty tampoka teny an-dalana 21/04/2021